Shuruudaha iyo shuruudaha – Red Sea Energy
Shuruudaha caadiga ah
Shirkada korontada bixisa waa Red Sea Energy. Qodobkaan iibsadaha korontada waxaa loogu yeeraa “macaamil”. Shuruudaha heshiiska waa la aqbalayaa marka macmiilku codsado in lagu wareejiyo Tamarta Badda Cas si ay koronto u isticmaasho. Xidhiidhka macaamiisha ayaa la aasaasayaa markii Red Sea Energy ay aqbasho dalabka. Macaamilku waa inuu iska bartaa shuruudaha soo socda. Bixinta korantada ee ‘Red Sea Energy’ waxay u dhacdaa si waafaqsan shuruudaha hoose. Haddii arrimo kale aysan saameyn ku yeelan qodobada heshiiska, Heshiiska Macaamiisha Elektiroonigga ah ayaa lagu dabaqayaa. Shuruudaha la cusbooneysiiyay ayaa had iyo jeer laga heli doonaa websaydhka Red Sea Energy ee ah www.redsea.energy.
Red Sea Energy waxay xaq u leedahay inay ku qiimeyso macaamiisha cusub awooddooda inay bixiyaan. Red Sea Energy mas’uul kama aha macmiil kasta oo koronto ka dalbada Red Sea Energy waxay jabisaa heshiis lala galayo shirkad kale. Red Sea Energy waxay xaq u leedahay inaysan aqbalin macaamiisha isla markaana aysan siinin koronto. Quwada korontada ee ka timaada Red Sea Energy waxay ka bilaaban kartaa 14 maalmood gudahood laga bilaabo marka uu macaamilka isdiiwaangaliyo. Haddii macaamilku ka qoomamo muddadii loo qabtay, isaga ama iyadu waxaa la weydiin doonaa inay bixiyaan korontada la isticmaalay, jf angrerettloven §21, laakiin wixii khidmad go’an ah ayaa laga jarayaa. Markay macaamiisha ka baxaan Red Sea Energy AS, macaamilku wuxuu ku jiri doonaa liiska sugitaanka ee shirkadooda cusub ee korontada ugu yaraan 14 maalmood, sidaa darteed waa mas’uuliyadda macmiilka inuu helo shirkad koronto oo cusub haddii macaamilku sidoo kale joojiyo qandaraaska shirkad koronto cusub. Tusaale ahaan: waxaad ka beddelaysaa Red Sea Energy AS oo loo beddelo KRAFT-A AS. Laakiin waxaad dalab cusub ka heli kartaa STRØM-B AS. Haddii aad saxiixday KRAFT-A AS, waa inaad ku wargelisaa KRAFT-A AS inaad u guurtay KRAFT-B AS.
SPOT sicirka Nordic Power Exchange (Nord Pool) + khidmadda billaha ah ee hadda + lacag yar oo dheeri ah + khidmadaha dadweynaha. Spot waxay raacdaa suuqa sarrifka awoodda. Qiimo go’an ayaa la dammaanad qaadayaa 12 bilood. 12 bilood kadib, macaamilka waa la ogeysiinayaa haddii ay jiraan wax isbeddelo ah.
Biilasha heshiisyada ayaa la soo diraa bil kasta. Biilasha waxaa lagu soo diri karaa emayl, mail ama sidoo kale waxaa lagu abuuri karaa debit toos ah iyadoo bil kasta laga jaro si toos ah koontada bangiga macaamiisha.
Marka lagu xasuusiyo, khidmadda xusuusinta waa la xisaabinayaa. Marka laga hadlayo aruurinta deynta, tixraac ayaa laga dhigayaa Xeerka Uruurinta Deymaha (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Haddii lacag bixinta lagu bixin waayo waqtiga kama dambaysta ah ee lacag-bixinta, bixinta quwadda waa la joojin karaa 14 maalmood ka hor ogeysiis hore, haddii macaamilku uusan ku hagaajin bixinta lacag-bixinta muddadaas.
Falanqaynta xogta waxay u dhacdaa si waafaqsan shuruudaha Sharciga Xogta Shakhsiyeed. cinwaanada iimaylka ee macaamiisha looma gudbin doono ogolaansho la’aan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan asturnaanta: halkan.